Labyrinth ပဟေဠိ: ဝင်္-A-ဝင်္ | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ပျော်စရာ & ဂိမ်းများ » Labyrinth ပဟေဠိ: ဝင်္-A-ဝင်္
Labyrinth ပဟေဠိ: ဝင်္-A-ဝင်္ APK ကို
ဒီထိပ်တန်းဝင်္ပဟေဠိဂိမ်းထဲမှာသင့်ရဲ့ဦးနှောက်ကိုလေ့ကျင့်! ဝင်္-A-ဝင်္ Labyrinth ပဟေဠိ သင်ကစားပွဲတိုးအဖြစ်အခိုင်အမာရမြောက်မြားစွာစိန်ခေါ်မှုအဆင့်ဆင့်နှင့်အတူလက်တွေ့ကျသောရူပဗေဒနှင့်ပျော်စရာဂိမ်း featuring အနေနဲ့အံ့သြဖွယ် labyrinth ပဟေဠိဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာစိန်ခေါ်မှုအချိန်ကန့်သတ်ဝင်္ပဟေဠိနှင့်အတူလှပသောပေါ့ပေါ့ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ကြယ်ပွင့်စုဆောင်းနှင့် minotaur (အနက်ရောင်အစက်) အားဘောလုံးကိုရွေ့လျားနေဖြင့်တစ်ဦးချင်းစီဝင်္ပဟေဠိဖြည့်စွက်။ မြင့်မားရမှတ်ရဖို့ရန်အတိုဆုံးအချိန်အတွက်အဆင့်ဖြည့်စွက်! အဆိုပါဝင်္ပဟေဠိအတွက် minotaur ဖို့ဘောလုံးကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့သင့်မိုဘိုင်း device ကိုရဲ့ accelerometer အခြေစိုက် tilt ထိန်းချုပ်မှုသို့မဟုတ်ထိတွေ့အခြေစိုက် Joystick တို့ကိုသုံးပါ။ တစ်ဦးချင်းစီဝင်္ပဟေဠိ၏အခက်အခဲအဆင့်တိုင်းအဆင့်နှင့်အတူတိုးပွားစေပါသည်။ ဒီဂိမ်းကနဦးအဆင့်ဆင့်ပြီးနောက်အလွန်ခက်ခဲရရှိသွားတဲ့မာအရူးနှင့်ကြောက်စရာဖြစ်ကြောင်းအဆုံးစွန်ပဟေဠိကြုံတွေ့ရဖို့ပြင်ဆင်ထားခြင်းရှိကြလော့။ ဤအဆင့်ဘောလုံးကိုစောင်းများနှင့်ထိန်းချုပ်၌သင်တို့၏အာရုံစူးစိုက်မှု, အာရုံနှင့်တိကျရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီဗားရှင်းပျော်စရာများနှင့်စိန်ခေါ်မှုဝင်္ပဟေဠိ၏ 30 အဆင့်ဆင့်နှင့်အတူကြွလာ။ Google Play ဂိမ်းဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အတူ, သငျသညျယခုသင်၏မိတ်ဆွေများဆန့်ကျင်သင့်ရဲ့ရမှတ်များနှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်ဦးဆောင်တက်နိုင်ပါတယ်။ ဂိမ်းထဲမှာသင့်ရဲ့တိုးတက်မှုအဖြစ်အောင်မြင်မှုများ Unlock ။ အပိုဆောင်းအောင်မြင်မှုသော့ဖွင့်ဖို့တိုင်းအဆင့်အပေါငျးတို့သ3ကြယ်များစုဆောင်း!အဆင့်ဆင့် 1-10: ရိုးရှင်းသောရူပဗေဒအခြေစိုက်ပဟေဠိတစ် set ကိုသင်ကစားပွဲကစားစတင်ရန်။ အနည်းငယ်အဆင့်ဆင့်အချိန်သင်ဘောလုံးကိုရွှေ့လမ်းကိုသငျသညျလိုအပ်ကြောင်းလုပ်ကွက်ရွေ့လျားပါပြီ။ သငျသညျငွိမျဝနှင့်အတူဤအဆင့်ဖြည့်စွက်နိုင်ဖြစ်သင့်သည်။
အဆင့်ဆင့် 11-20: Red အဒေသများမိတ်ဆက်ခြင်း! သင်တို့သည်ဤအဆင့်ဆင့်အတွက်တိကျနှင့်အတူဘောလုံးစီမံကိုင်တွယ်ရန်လိုအပ်သည်။ အနီရောင်ဒေသများထိပုစတင်အနေအထားရန်သင့်အားပြန်စပါ။ ဤအဆင့်စိတ်ရှုပ်စေသောပိုမိုစိန်ခေါ်မှုများမှာနှင့်သင့်သည်းခံခြင်းစမ်းသပ်ပါလိမ့်မယ်။ သင်တို့သည်ဤအဆင့်ဆင့်ဖြည့်စွက်တစ်ချိန်ကသင်တို့သည်ဧကန်အမှန်အောင်မြင်မှုတစ်ခုသဘောမျိုးခံစားရပါလိမ့်မယ်။
အဆင့်ဆင့် 21-30: ကျည်ဆံမှုတ်ဆေး, Control လုပ်ကွက်, ပေါက်ကွဲလုပ်ကွက်နှင့်ပိုပြီးမိတ်ဆက်ခြင်း! ဤအဆင့်ယခင်အဆင့်ဆင့်ထက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်ဖြစ်ကြပြီးတစ်ဦးချင်းစီအဆင့်ဖြည့်စွက်ရန်မဟာဗျူဟာရှိသည်ဖို့သငျသညျလိုအပ်သည်။ ဤရွေ့ကားပဟေဠိလည်းအမှန်တကယ်သင့်ရဲ့သည်းခံခြင်းနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုစိန်ခေါ်နှင့်သင့်စိတ်ကိုမှုတ်ဖို့သေချာပါသည်။
သတင်း / updates တွေကို facebook ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုလိုပဲ:
နောက်တစ်နေ့ update ကိုသစ်ကိုဂိမ်း features တွေပိုမိုစိန်ခေါ်မှုဝင်္ဆံ့မည်ဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့မိတ်ဆွေများဝင်္-A-ဝင်္ Labyrinth ပဟေဠိအကြံပြုအားဖြင့်၎င်း, တစ်ဦးအပြုသဘောပြန်လည်သုံးသပ်ထွက်ခွာခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပံ့ပိုးပေးပါ။
ဝင်္-A-ဝင်္ယခု Google Play ဂိမ်းဝန်ဆောင်မှုများကို support!
သင်ကစားပွဲထဲမှာတိုးအဖြစ်အသစ်သောအောင်မြင်မှုများဝင်ငွေ။ နောက်ဆုံးပေါ် update ကိုနှင့်အတူသင်၏အောင်မြင်မှုများယခုသင်၏ Google Plus အားပရိုဖိုင်းတှငျမှတျတမျးတငျထားသရ!
ဒါကနောက်ဆုံးထွက် update ကိုယခုထိအခြေစိုက် Joystick ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်တုန်ခါမှုများထောက်ခံပါတယ်။ တစ်ဦး 5-ကြယ်ပွင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ထွက်ခွာဖွငျ့ကြှနျုပျတို့ကိုသင့်ရဲ့ထောက်ပံ့မှုကိုပြသပေးပါ!
15.84 ကို MB
JSplash Apps ကပ